Tsy ny any Soamahamanina ihany : lasan’ny Sinoa koa ny tany any Amboasary Gara sy Anjiro… | NewsMada
Par Taratra sur 20/07/2016
Ny eo tsy milamina, misosoka ihany koa ny hafa. Lasan’ny Sinoa koa ny velaran-tany midadasika, hitrandrahana volamena, any amin’ny kaominina Amboasary Gara sy ny kaominina Anjiro, any amin’ny distrikan’i Moramanga.
Efa vita avokoa ny dingana rehetra amin’ny hahazoan’ireo Sinoa mitrandraka izany volamena izany. Fanamarinana amin’ny alalan’ny rango-pohy milaza ny nandalovan’ireo Sinoa sisa no hany azon’ny tompon’andraikitra isan-tokony natao. ” Efa tonga teto aminay ireo Sinoa ary nitondra taratasy, efa voasonian’ olona ambony eto amin’ny firenena. Fahampafatarana ihany no nataon’ ireo delegasiona tao amin’ny ben’ ny Tanàna sy kaomandin’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena fa hanao fizahana volamena amin’ny velaran-tany midadasika, manomboka eto Ambaosary ka hatrany Anjiro izy ireo“, hoy ny sefo fokotany Ambahoabe ao amin’ny kaominina ambanivohitra Amboasary Gara. Tsy nandà ny fisian’ny fanaovana sonia izany ny be’ny Tanàna ao Amboasary sy ny zandary ao an-toerana raha nanotaniana. “Akory atao fa efa nosoniavin’ny lehibe avy any ambony ny raharaha. Fahampahafatarana ny anay ka nasiana rango-pohy milaza fa nandalo teto aminay izany“, hoy izy ireo.
Toherin’ny sefo fokontany
Hany tokana, tsy nanaiky nanao rango-pohy ny sefo fokontany ao Ambahoabe noho ny tsy fanekeny izao fibodoana ny harena an-kibon’ny tany ataon’ny vahiny ao aminy izao.
Manoloana izany, zary lasa mitaintaina amin’ny mety hisehoan’ny tranga tahaka ny any Soamahamanina koa ny mponina satria ho voafaoka hatramin’ny faritra misy ny fasan-drazana ; ireo tany fambolena ary fotodrafitrasa fanabeazana, ankoatry ny trano fonenana, mety ho very raha hirosoana koa izao fitrandrahana ataon’ny Sinoa izao.
Tsiahivina fa efa nanaitra ny fitondrana ary efa nitsangana ny evekan’i Madagasikara eo anivon’ny Justice et Paix, ny herinandro teo. « Loharon-tebiteby ho an’ny vahoaka malagasy efa trotraky ny adim-piainana ankehitriny ny tahaka izany. Manjavozavo ny ho avy, satria ny tany natao ho fototry ny fivelomana sy ilevenan’ny razana amidy amin’ny hafa”, hoy ny fanambarana.
Ho lasa pitikafo handrehitra ny vanja
Manoloana izany, manao antso avo amin’ny tompon’andraikitra ambony eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny eveka fa ilaina ny fifampidinihan’ny ankolafin’olona rehetra. “Ahafahan’ireo tompon’andraikitra mihaino ny hetahetan’ny vahoaka. Fifanakalozan-kevitra momba ireo olana sedraina ankehitriny mba itadiavana vahaolona maharitra no atao. Heverinay fa lalana ahafahana misoroka ny savorovoro mety ho lasa pitik’afo hampirehitra ny vanja izany. Miangavy anareo antanan-droa mba tsy hanao be marenina na hatoky tena toy ny antsy be zara”, hoy ihany ny eveka. Nanterin’izy ireo fa tokony hampiharina ny mangarahara amin’ny fitrandrahana ireo harena an-kibon’ny tany. “Tsinjovina mandrakariva ny soa iombonana sy ny hasina maha-olona raha misy fanapahan-kevitra goavana momba izany”, hoy ny eveka.
Ho tonga hatraiza indray izany izao ity “Raharahan’Amboasary Gara sy Anjiro” ity ?